Fianarana ara-tantara - So Fine Plastic Technology Co.
Koa Fine natsangan'Andriamatoa Wang Weiqiang tao Beijiao, Shunde & natomboka tamin'ny asa plastika.
Nandritra ny fihazonana ny orinasa plastika dia nanomboka ny famokarana sy ny varotra fitaratry ny vera sy ny vata fampangatsiahana / cooler / chiller varavarana fitaratra i So Fine & nanomboka niara-niasa tamin'ny mpanamboatra vata fampangatsiahana ara-barotra sy mangatsiatsiaka any Shina izahay ary nanome varavarana fitaratra So Fine ho an'ireo mpanamboatra ireo.
Ka nanomboka nahita fitomboan'ny varotra fitaratra vata fampangatsiahana i Fine. Nivoatra ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanamboatra vata fampangatsiahana an-trano bebe kokoa. Mandritra izany fotoana izany dia nitombo ny ekipantsika avy tamin'ny olona 30 ka hatramin'ny olona 50 mahery.
Ka nanomboka nanatrika ny foara Kanton i Fine ary nanandrana nanokatra ny tsenan'ny varotra eran-tany tamin'ity taona ity.
Rehefa nitombo ny fangatahan'ny tsena anatiny sy ivelany ny vokatra vata fampangatsiahana, dia nanomboka nitombo haingana koa ny orinasa varavarana fitaratra so Fine. Ny ekipanay dia nitombo ho olona 80 ary niara-niasa tamin'ny mpanjifa marika avy any amin'ny tsena Eoropa sy Amerika Avaratra izahay. Ny ekipanay R&D dia nanao andrana bebe kokoa hanitarana ny vokatra fitaratra mitainginaand izahay dia nanampy andalana famokarana vaovao ho an'ny vera louver voahosotra ary nanandrana ny hijery ny fahafahan'ny fiaraha-miasa amin'ny faritra am-baravarankely sy varavarana.
Ny fampiroboroboana ny fandraharahana anatiny sy iraisam-pirenena dia nitondra fitomboana haingana teo amin'ny sehatry ny asa. Ka nifindra tany amin'ny orinasa lehibe lehibe kokoa i Hongsheng any amin'ny faritr'i Lunjiao, Shunde.
Ny ekipantsika dia nitombo ho olona 100.
Ho valin'ny tena filan'ny mpanjifa sy ny tsena, So Fine nanangana orinasa vaovao ho an'ny vata fampangatsiahana ara-barotra & cooler. Afaka manome safidy bebe kokoa ho an'ny mpanjifantsika izahay. Ny orinasanay dia mampiditra fitaovana famokarana mandeha ho azy ary mikendry ny hanao automatique 60% ny famokarana ao anatin'ity taona ity.